CalendarKhalenda lenyanga yokuqala ka-Ephreli 2020
Ngo-Mashi kusekuhle impela, futhi ngo-Ephreli, izinsuku ezifudumele ekugcineni sezifika. Lesi isikhathi esihle kakhulu sabalimi. Kule nyanga banomsebenzi omningi okufanele bawenze. Ukuyenza ikhiqize, kunconywa ukulandela ikhalenda le-Lunar lika-Ephreli 2020. Uzokutshela ukuthi yiziphi izinsuku ezingahle zisebenze ngokusebenza ngezimbali nokuthi yiziphi ezingeke.
Calendar Ikhalenda Lunar lomhlwanyeli ngoFebhuwari 2020
NgoFebhuwari yinyanga emfushane kakhulu yonyaka lapho abalimi bedinga ukwenza okuningi. Izitshalo zizwa ukusondela kwentwasahlobo futhi zidinga ukunakekelwa okukhethekile. Ngaphezu kwalokho, ekupheleni kobusika, ukutshala izitshalo eziningi zokuhlobisa kuqala. Ngalesi sikhathi, kubalulekile ukulandela izincomo zekhalenda le-Lunar, unake izinombolo ezinhle nezingalungile zokuhlwanyela nokutshala.
Calendar Ikhalenda Lunar lomhlwanyeli ngoMashi 2020
NgoMashi kusabanda impela, kepha yisikhathi sokuba abalimi balungiselele ukutshala kwentwasahlobo. Udinga ukuhlola isimo semibhede yezimbali, uzibeke ngokulandelana, uqiniseke ukuthi izimbali zasinda ebusika kahle. Kuyadingeka ukususa izinto zokukhosela ezikhathini zemvelo, ukhulule inhlabathi bese ufaka izingxube zezakhi. Lapho usebenza, abalimi bayayalwa ukuthi bagxile kukhalenda lanyanga likaMashi 2020.
Ikhalenda lenyanga yomgcini wegadi nensimu ka-2020
Ikhalenda lenyanga labalimi nabalimi bazokutshela ukuthi ungasebenza ngaluphi usuku futhi ongalusebenzisi. Futhi, hlobo luni lwezenzo olwenziwa kangcono ngosuku oluthile. Ukuhambisana nezincomo eziqukethwe kuyo kukuvumela ukuthi ufinyelele ukukhula okuhle kwezitshalo kanye nokuvuna okunothile. Umthombo: potokudach.ru Ngabe ngidinga ikhalenda yenyanga yomsebenzi engadini Abanye abantu abakholelwa ukuthi izigaba zenyanga zithonya ukukhula kwezitshalo, kodwa ngeze.
Ikhalenda lenyanga lomphathi wegadi kanye nensimu ka-Ephreli 2020
Ngo-Ephreli 2020, umsebenzi omningi usamele wenziwe, futhi ikhalenda lezinsuku nenyanga yalowo osebenza engadini nabasebenza engadini lizosiza ukubhekana nakho ngendlela engcono kakhulu. Uzokutshela izinsuku ezinhle nezingathandeki ngokusebenza nezitshalo eziluhlaza, izimbali, izithombo, imifino, njll. Uma silandela izincomo ezinikezwe ngezansi, nakanjani sizothola isivuno esicebile.
Isilinganiso se-Lawn Mower: Ukukhetha Okuhamba phambili
Utshani obuluhlaza obuphakathi kwendlu akuyona nje umhlobiso wezwe, kepha futhi yindawo yokuphumula. Ukwenza utshani bubukeke, udinga ukuwanakekela, ikakhulukazi, ukuwugaya njalo. Ungonga isikhathi ngomtshisi wotshani. Izisetshenziswa kufanele zithengwe ezitolo ezikhethekile. Uma kukhethwe kahle, ngeke kube nezinkinga ngokusebenza kwayo.
☀ Ukuhlwanyela Ikhalenda Lunar lomgcini wegadi nensimu ngoMashi 2020
Inyanga yokuqala yentwasahlobo isemihle impela, kepha yize kunjalo, yisikhathi sokulungela ukusebenza engadini. Noma ngabe kuneqhwa elinzima, isenzo esithile sisengathathwa. Sebenza emibhedeni Ngaphezulu kwemibhede enezilimo ezenziwa ngaphambi kobusika, kanye nalezo ezenzelwe ukutshala imifino yokuqala, faka ama-arc bese uwamboza nge-polyethylene.
Calendar Ikhalenda lokuhlwanyelwa kweLunar yomgcini wegadi nensimu ngoFebhuwari 2020
Ngaphandle kokuthi uFebhuwari angafudumala, kusesekuseni kakhulu ukutshala imifino kanye nemifino engadini, kepha ungayinakekela imbewu ngaphambi kwesikhathi. Kungcono ukuthenga lezo ezizisungule kahle esizeni ngonyaka owedlule; i-microclimate nenhlabathi ziyazifanela. Umthombo: www.youtube.com Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi imikhiqizo emisha kufanele ilahlwe.
Amaphrojekthi we-greenhouse okuzenzela ngokwakho
IGreenhouse - umklamo obaluleke kakhulu kunoma iyiphi ingadi. Ikuvumela ukuthi uvikele izithombo, imifino kanye nezitshalo zakuqala eziqandeni, kunikeza isivuno esiningi, noma kubanda. Ukwakhiwa kungaba ngezindlela ezahlukahlukene nobukhulu, ngakho-ke ngeke kube nzima ukukulanda noma isiphi isiza ngendlela yokuthi kufanelana kahle futhi kungahlali endaweni efanelekile.
Ukuphoqelela ama-hyacinths ngoMashi 8, uNyaka Omusha namanye amaholide: imiyalo
Ama-bulbs amaningi, lapho esekhulile endlini, aqhakaza ebusika nasekuqalekeni kwentwasahlobo (ama-daffodils, izingwenya namanye). Kodwa-ke, esinye sezithandwa kakhulu, okulula ukusabalalisa, yi-hyacinths. Njengoba sebevule ama-buds, bazoba isipho esihle seholide, ngokwesibonelo, ngoNyaka oMusha noma ngoMashi 8. Ama-Hyacinths kufanele asatshalaliswe ngokuhambisana nemithetho ethile ukuze kufezekiswe ukuqhakaza okumibalabala.
Ukugunda izinwele - umcimbi obanjelwe ukuthuthukisa utshani obuluhlaza nokulondolozwa kwama-aesthetics we-infield. Ukufeza umphumela oyifunayo, udinga ukulandela uhlelo lwezinqubo zasengadini. Lapho uyihlanganisa, kubalulekile ukubheka izimo zezulu kanye nokuhlukahluka kwekhava yotshani.
I-Rolled utshani: uhlelo lokusebenza, ukubeka isinyathelo ngesinyathelo, amanani
Utshani yinto esetshenziselwa ukwakheka kwendawo enikeza icebo ukubukeka okuhle. Phambilini, ukuze kutholakale ukhaphethi omnandi obuluhlaza, insimu ebekelwe yona yayihlwanyelwa ngezinhlanganisela ezikhethekile zamakhambi. Le ndlela ayinangqondo: idinga ukutshalwa kwezimali okubalulekile, ukuzikhandla nesikhathi. Namuhla ungasebenzisa i-roll lawn.
Umanyolo for utshani
Ukuze ulondoloze ukubukeka okukhangayo kotshani, awudingi nje kuphela ukulungisa nokuwunisela njalo, kodwa futhi usebenzise nomanyolo. Njengoba utshani bukotshwa buvuselelwa ngezikhathi ezithile, buye balahlekelwe izakhamzimba ezinqwabelana ezihlahleni. Ukuze ukugqoka okuphezulu kube yinzuzo, kufanele kusetshenziswe ngokuhambisana nemithetho ethile.
Utshani botshwala buqala ukulimala uma bunakekelwa ngokungafanele. Ukungavikeleki kwakhe kungahle kube buthaka ngenxa yezimo zesimo sezulu ezingalungile kanye nokulimala kwemishini. Amaphutha enziwa lapho kukhethwa ingxube yotshani futhi kuzophazamisa ukubukeka kotshani obuluhlaza. Ukubona isisusa esanikeza umfutho ekwandeni kwalesi sifo, kufanele kuthathelwe ingqalelo ama-nuances alandelayo: utshani obunotshani bubekezelela izifo ezifanayo ngezindlela ezihlukile; Phakathi kwamagciwane athelelekayo, isikhunta siyahola.
Yini utshani obunamanzi futhi kubiza malini
Ingca enhle eluhlaza phambi kwendlu iyingxenye ebalulekile yomklamo wesimo sendawo yanamuhla. Ngaphandle kokubukeka okulula, ukwakheka kwengadi yomuntu siqu kule sitayela kudinga izindleko ezihlaba umxhwele zezikhathi nesikhathi samahhala. Njengoba le nqubo imatasa, ungahlala ungaphendukela kochwepheshe.
I-Bluegrass: Izinhlobo zotshani, incazelo yazo, uhlelo lokusebenza, izici zokutshala
I-Bluegrass luhlobo lwe-perennials okusanhlamvu noma ngonyaka. Endle, ihlala kuzo zombili izindawo ezihlala ezindaweni ezinesimo sezulu esibandayo nesithokomele. Ezinye izinhlobo zingatholakala ezindaweni eziphakemeyo ezindaweni ezishisayo. Uhlobo luhlanganisa izinhlobo ezingaphezu kwama-500. Bheka izinhlobo ezisetshenziselwa ukudala utshani.
Itshani lamaMoorish: kuyini, izinzuzo nezingozi, inqubo yokuqalwa kokunye nokunakekelwa okulandelayo
Enye yezinhlobonhlobo zotshani obumnandi yiMoorish. Ngaphambi kokuthenga imbewu, kufanele uthole ukuthi imelelani, iziphi izinzuzo nobubi onabo. Zijwayeze nezici zokutshala nokunakekela ukuze uqonde ukuthi le ndlela ilungele ukuhlala ehlobo. Yini umhlabathi wamaMoorish Uhlobo lwakwaMoorish, ngokungafani naphansi komhlaba nabanye, kulula ukulunakekela.
Izidakamizwa ezinotshani kanye nezindlela zokulawula
Hhayi izifo ezahlukahlukene kuphela, kodwa nezinambuzane ezingonakalisa ukubukeka kotshani. Futhi lezi akuzona izinambuzane kuphela, kodwa futhi nezilwane, izinyoni. Cabanga izindlela ezivame kakhulu nokuthi ungawavimba kanjani umthelela wazo ongemuhle otshanini. Izikelemu zomhlaba Zikholwa ukuthi zinomphumela omuhle ezimeni zenhlabathi.
Ngaphambi kokubeka utshani, umhlaba wemba, waphathwa ngamalungiselelo akhethekile okhula. Kodwa-ke, imbewu yabo ithwalwa ngumoya, izinyoni, izilwane, njll., Ngakho-ke, iyavela, naphezu kwezinyathelo zokuvimbela. Lokhu konakalisa ukubukeka kotshani. Ngaphezu kwalokho, ukhula luyamelana kakhulu nesimo sezulu esibi, ukunyathela, ngakho-ke, ngokuhamba kwesikhathi, kubhubhisa izitshalo zotshani.
Ukutshala utshani: isidingo, isikhathi nemithetho
Ukutshala utshani kusiza kakhulu kanye nokucheba, ukuchelela, ukukhulisa kanye nokunciphisa. Inomthelela ekuthuthukisweni okungcono kohlelo lwezimpande zezitshalo, kusiza ukuvuselelwa kabusha. Ukuthola umphumela osebenzayo, kubalulekile ukwenza inqubo ngendlela efanele. Sizobheka ukuthi hlobo luni lokukhwabanisa, ukuthi yisiphi isikhathi nokuthi senziwa kanjani, ungayikhetha kanjani isihlabathi, noma ngabe kukhona okuphambana nenqubo.